Maxay tahay halka arrin ee MW Ukraine u sahashey inuu ilaa haatan u babac dhigo Ruushka?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxay tahay halka arrin ee MW Ukraine u sahashey inuu ilaa haatan...
Maxay tahay halka arrin ee MW Ukraine u sahashey inuu ilaa haatan u babac dhigo Ruushka?!
(Hadalsame) 26 Abriil 2022 – Madaxwaynaha Ukraine ee Volodymyr Zelenskyy ee Majaalistaha ah (Comedian) wuxuu ku guulaystay inuu Dowladda 2-aad ee duniga ugu awooda badan uu ilaa xad iska caabbiyo uuna helo kalsoonida dowladaha xulufada la ah kuwaasoo aan ka kala joojin hubka iyo dhaqaalaha.
Wuxuu iska gaday dunida oo dharaar walba wuxuu soo taagan yahay shaashadaha adduunka. Haddaba, sidee Majaajaliste awooddaa u yeelan karaa?
Jawaabta oo fudud, ma ahan kaligiis, go’aanada kaligiisa iskama qaato, dalkana siday isaga uun la tahay kama yeelo. wuxuu leeyahay la taliya-yaal wanaagsan oo khibrado kala duwan leh iyo kuwa kale oo xiriirka dunida u qaabilsan.
Sirtu ma ahan inaad Balaayo tahay ama aad PhD wadato, ee talada wadaaji, oo dad fiicanna xulo, qof walbana meesha uu ku haboon yahay dhig.
Madax kale ayaa jirta dunida oo qaarkood xitaa madaxa looga jiro ama indhoolayaal ahaa, laakiin dalalkooda maamula, sirtu wax kale ma ahane waa dadka ku ku hareeraysan.
W; D: Cabdiraxmaan Cabdirisaaq Cabdiraxmaan
Previous articleMW Xigeenka Puntland ee Axmed Karaash oo usoo jawaabey MW Siciid Deni (5 qodob oo uu soo saaray)
Next articleSomalia oo ay ka bilaabatay FARSAMO cusub oo kacaamin doonta intifaaca xoolaha nool + Sawirro